Aza mbola misioka -
AccueilTresakaAza mbola misioka
Aza mbola misioka
21/12/2018 admintriatra Tresaka 0
Mbola lavitry ny afo ny kitay raha ny fanangonan’ny CENI ny voka-pifidianana manerana ny Nosy. Mbola tsy nahavita akory ny 50% n’ny biraom-pifidianana ity sampandraharaha ity hatreto. Ankehitriny anefa dia efa misy sahady no mirehareha fa mpandresy izy. Aza mbola misioka re raha tsy tafavoaka ny ala a! ary aza mandihy tsy afa-tavony. Ny CENI dia sampandraharaha mikarakara ny fifidianana fotsiny fa tsy mpanambara ny vokatra ofisialy. Andraikitra sy adidin’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana izany, ka aza misioka raha mbola tsy tafavoaka ny ala.
Mandeha tsikelikely ny fahatongavan’ny voka-pifidianana eny amin’ny CENI, ary mivoatra manaraka izany ny zava-misy, ka aoka tsy hisioka aloha.
Ilay misioka alohan’ny fotoana mantsy dia mampiahiahy ihany, satria toa manao tsinontsinona ny andrim-panjakana misy. Ny voka-pifidianana anie ka tsy mionona fotsiny tamin’ny fanisana ny vato narotsaky ny mpifidy araka ny safidiny e! fa aoka tsy hohadinoina, ary aoka hazava fa marobe ireo tsy lavorary tamin’ity fifidianana ity. Ny CENI rahateo dia efa niaiky ny fisian’ny tsy fahatomombanana.
Ilay misioka alohan’ny fotoana kosa dia toa midika fa tsy asianareo sira ary odianareo tsy hita ny zava-misy nentina nangalaram-bato nitranga tamin’iny fifidianana iny. Hitam-poko hitam-pirenena anie ireo bileta tokana efa voamarika mialoha ireny e ! hitam-poko hitam-pirenena anie izany fampiasana karapanondro na kara-pifidianana sandoka ireny e ! ka raha mbola tany tan-dalàna i Madagasikara dia tokony hisy fepetra horaisin’ny tompon’andraikitra manana ny fahefana amin’izany, fa tsy avela handeha fotsiny toa ny nahitan’ireo mpanara-maso ny fifidianana tamin’ny fahatrarana ireo kandidà nizara vola tamin’ny mpifidy.
Etsy ankilany moa dia efa manomboka miseho lany ny fandrahonana sy fampitahorana samihafa ataon’ireto mpisioka mbola tsy tafavoaka ny ala ireto raha tsy hilaza afa-tsy ny fikasihan-tanana, fitifirana ary famonoana ireo mpifaninana aminy.
Tany misy lalàna i Madagasikara, ka aza mitsako alohan’ny vazana ka hisioka sahady nefa tsy tafavoaka ny ala.
Fanomezana vahana ny tanora ho lasa mpandraharaha tsy miankin-doha, mba ho fampivoarana ny fireneny sy ho fitsinjovana ny ho avin’izy ireo, no tanjon’ny fihaonana an-tampony faha-5n’ ny vondrona eraopeana sy vondrona afrikanina, notontosaina nanomboka omaly ...Tohiny